Ihe m na-ekiri, Ihe Ka Mma Ga-esi! | Martech Zone
Ihe m na-ekiri, Ihe Ka Mma Ga-esi!
Tuesday, August 14, 2007 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Mgbe ụfọdụ, m na-eche ma ọ bụrụ na ihe mgbaru ọsọ ga-ewe ogologo oge na-adọpụ uche anyị n'ọrụ anyị. Ọ bụrụ na ọ na-agụkarị gị agụụ inweta ọtụtụ ihe, ị na-enwe a happyụrị ebe ị nọ? Oge ụfọdụ ọ na-ewe nnukwu ọdachi n ’ụlọ ma ọ bụ n’ebe anyị nọ ka anyị chọpụta ihe niile anyị nwere ike inwe ekele maka ya.
N’izuụka a gara aga, blọọgụ m abịaghachila na mmezi. Amalitere m ọrụ ọhụrụ ma na-arụ ọrụ abalị iji mepụta ngwa ọzọ - ha abụọ na-etinyekwa uche ha. Adịghị m ezigbo njegharị - ọ na-amasị m itinye uche n'ihe mgbaru ọsọ ma rụọ ọrụ iji nweta ya. N'ihi ya, m lekwasịrị anya n'ọrụ ọhụrụ m ugbu a siri ike. Ozugbo m hapụrụ ọrụ ma wụ n'ụgbọala m, uche m na-atụgharị gaa na ọrụ akụkụ ahụ. N’ime ụtụtụ ụtụtụ, ọ laghachila n’echiche banyere ọrụ m.
Echefuola na izu ole na ole gara aga bụ blog m. Anọgidere m na-agụ akwụkwọ m na-agụ kwa ụbọchị mana ọ kachasị mma na blọgụ m. Ekwetaghị m na e mezuru ha ọsọsọ - mana anaghị m etinye uche m niile dịka m kwesiri. Ikekwe mpaghara m leghaara anya kachasị na-enyocha m Ad Ego, Analytics na ọkwa. Ama m na m nwere ọrụ m ga-arụ, enweghịkwa m ike iche maka ọnwụ a, yabụ m kpebiri ileghara ya anya.
Àgwà nke ileba anya n'ọkwá m na ịzụ ahịa na-aghọ nnọọ ibu ọrụ! Ekwetaghị m na m ga-enyocha ya karịa otu ugboro n'ụbọchị, mana mgbe m lere anya na ọnụọgụgụ, m ga-atụgharị ya ọtụtụ awa wee gbalịa ịlụ ọgụ. Ọ dị ntakịrị ka ịchighachi ebili mmiri - ịgụ akwụkwọ gbasara ọkụ, ọ bụghị mmeghachi omume. Nke ahụ pụtara na ọ bụ marathon na ọ bụghị ọsọ ahụ… na achọrọ m ichetara onwe m nke ahụ mgbe niile.
Yabụ - ọ bụrụ na stats gị anaghị aga na ntụpọ ịchọrọ, ikekwe ịkwesịrị ịhapụ kompas. Enwere m ike ikwu n'eziokwu na m na-agagharị nke ọma ugbu a… onye na - agụ akwụkwọ m dị elu, ndepụta m na - arị elu ... na ego m ga - enweta. Achọrọ m ime ihe m kachasị mma ma ọ ga - eme ka ọ pụta maka ogologo oge ma kwụsị ikiri nọmba. Aga m alaghachi Ntuziaka Blog ozigbo m rụchara ọrụ m! Ekele dịrị ndị niile na-agụ akwụkwọ ndị ji ndidi na-echere.
Obere oge m na-ele, ihe ka mma ga-enweta!
Tags: analysisnyocha ahumkponwuAnalytics
Asọmpi Wiki nke Nde Dollar si John Chow dot Com
Fav.or.it na-ebupụta Preview
Nice obere akụkọ 🙂 m nwere ike ikwu na nke a bụ ikpe m ugbu a, na-elele m Adsense ọwa stats dị ka mgbe m nwere ike, ebe ọ bụ na ọ bụ optimizing oge m. Mana nke a kwụrụ ụgwọ, yabụ aga m akwụsịlata ntakịrị going
Ekwenyere m. Ọ nwere ike ịbụ ihe dị mfe itinye onwe gị na stats. M ka na-ele stats m otu ugboro n’ụbọchị nke m chere na ọ bụ nke ukwuu.
Naanị ilekwasị anya n'ide ọdịnaya dị mma na ire blọgụ gị yana okporo ụzọ ga na-abịa 🙂
Enwere m ike ịkọ kpamkpam! Karịsịa ebe ọ bụ na ụlọ ọrụ m blog bupụtara ma si otu a malite ọkọ ọzọ, ọ bụ ihe nzuzu oge ole m na-etinye oke egwu n'ihe banyere nke anyị dị ugbu a, mara mma mwute stats .. na-eme ọtụtụ mma!
Achọrọ m ka ị nwee obi ụtọ, ejiri m n'aka na mgbe ị banyere n'ime ihe ị ga-emekwu oge maka ịdee!
Henri @ B2B Ahịa Blog
M nwekwara ike ikwu na nke dị n'elu. Echere m na ọ bụkwa akụkụ dị mkpa nke ndụ dị ka onye na-ede blọgụ (na onye na-ere ahịa / ahịa). Site n’oge ruo n’oge, ana m ahụkwa na m na-enyocha stats saịtị m ọtụtụ mgbe. Ekwesịrị ịgha onwe m n'azụ mgbe ahụ ka m wee nwee ike ịdabere na ịmalite ọdịnaya mbụ.
Dị ka ọkachamara ahịa onye m makwaara nke a: Ọchịchọ iwepụta oge ịkọ amụma, akwụkwọ ntanetị, wdg. N'ọnọdụ ịnọdụ n'ihu ndị ahịa gị na-emechi azụmaahịa na ichegbu onwe gị gbasara nyocha ọrụ ahụ. Dịka onye na - ede blọgụ, achọrọ m itinye uche m na ịchọta ndị debanyere aha m site na itinye uche na ọdịnaya flagship. Na ndị ọzọ ga-abịa, dị ka ha na-ekwu 😉